Xildhibaan Mahad Salad oo macno yaab leh u sameeyay weerarkii Xalane ee maanta - Caasimada Online
Home Warar Xildhibaan Mahad Salad oo macno yaab leh u sameeyay weerarkii Xalane ee...
Xildhibaan Mahad Salad oo macno yaab leh u sameeyay weerarkii Xalane ee maanta
Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo inta badan dhaliila hogaaminta madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si yaab leh uga hadlay hoobiyeyaashii maanta lagu tuuray xerada Xalane.
Mahad Salaad ayaa su’aal geliyay in Madaafiicda maanta Xalane lagu garaacay uu ka dambeeyo madaxwenaha uu waqtiga ka dhamaaday ee Farmaajo, asaga oo ku eedeyay in uu weerarka hoobiyeyaasha uu ka leeyahay ujeedo gaar ah.
“Madaafiicda maanta Xalane lagu garaacay Farmaajo miyaa ka dambeeya mise wada shaqayntii Shabaab iyo iyaga ayaa dhabowday oo gacan Shabaab ayay rabaan in ay wax ku cunaan Fahad iyo Farmaajo!,” ayuu yiri Mahad Salaad.
Eedeynta Mahad Salaad oo ah mid culus ayey si madax banaan u xaqiijin karin Caasimada Online, hase yeeshe weerarka hoobiyeyaasha lagu eekeyay xerada Xalane ayaa imanaya ayada oo uu maanta kasoo degayay garoonka Muqdisho madaxweynaha Jubbaland oo si weyn isku hayaan madaxda sarre ee dowladda federaalka.
Weerarka madaafiic ah ayaa maanta duhurnimadii lagu qaaday xerada Xalane ee magaalada Muqdisho, oo ah halka ay degan yihiin safaaradaha dalalka caalamka iyo hay’adaha caalamiga ah.
Ilo-wareedyo ku sugan xerada ayaa Caasimada Online u sheegay in qiyaastii 6 hoobiye ay kusoo dhaceen gudaha xerada, kuwasi oo gaystay khasaare hantiyeed. Muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya khasaare isku jira guryo iyo baabuur oo ay sababeen madaafiicda so dhacday.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda weerarka oo uu Xildhibaanku ku eedeyay in weerarkan cadeyn u yahay gacan-saarka kala dhaxeeya Farmaajo ee kooxdan.